Global Voices teny Malagasy » Ekoatora: Fiampangana sy Fanombanana Taorian’ny Fihokoan’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy » Print
Ekoatora: Fiampangana sy Fanombanana Taorian'ny Fihokoan'ny Polisy
Voadika ny 05 Oktobra 2010 7:51 GMT 1	 · Mpanoratra Paulina Aguilera Muñoz Nandika (en) i Silvia Viñas, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona
Taorian'ny ora maro niainana tahotra, safotofoto sy fisalasalana, dia andro vaovao indray no miposaka eto Ekoatora. Na izany aza, andro iray rakotry ny fihetseham-po mahery vaika sy fanaovana kaonty ny anio, taorian'ny fihokoa-dry zareo polisy niteraka fikatsoan'ny firenena . Ao amin'ny Twitter dia miteny i @candradepa :
Sahala amin'ny hoe nifoha maraina taorian'ny fetibe nanarànam-po tamin'ny alikaola sy zava-mahadomelina i #Quito … 
Fihetseham-po ifampizaràna io. Manao adisanina i [es]  Andrés OleasPesántez (@aoleasp ) :
193 naratra, ain'olona 5 no nafoy ary an-tapitrisa dolara ny fatiantoka… misy olona afaka manazava amiko ve hoe, inona izao no azontsika? #ECUADOR 
Tatitra tsy misy valaka amin'izany ny avy amina tanàna Ekoatoriana hafa toa an'i Guayaquil sy Cuenca [es] . Mitatitra i Esther Burgos (@noe_eb ‎) fa ,
Mbola renay foana ny anjomaran'ny fiaran'ny polisy, ary mbola misidintsidina eo ambonin'i Guayaquil ireo angidimby #Ecuador 
Mampahafantatra koa i Erika Solis Tlachi (@erikadesing),  avy ao amin'io tanàna io ihany:
Maika, fandrobàna aty guayaquil ekoatora – http://bit.ly/dycQoI  #ireport 
video-n'ny fandrobàna avy amin'olon-tsotra
Omaly 30 Septambra, taorian'ny fanambaràna fitokonana avy amina vondrona iray misy manamboninahitry ny polisy, ny fanakatonana ny seranam-piaramanidina sy ny fahatongavan'ny Filoha Correa tao amin'ny Metropolitan Hospital, nanomboka nivoaka tao amin'ny aterineto ny vaovao samihafa toa mifanjevo be ihany. Niaraka tamin'izy ireny ny fampitam-baovao fa hoe notànan'ireo polisy tao amin'ny hopitaly i Correa ary mananontanona ny fitondrana ara-dalàna ny fanongànam-panjakana.
Na dia nampiasa ny teny hoe “fanongànam-panjakana ” aza ny mpampita vaovao, ny fahanginana sy ny firotsahana taoriana kely nataon'ny Tafika  hanavotana an'i Correa tao amin'lay Hopitalydia maneho fa tsy nisy firaisana tsikombakomba avy amin'ny tafika hanalàna an'ingahy Correa eo ny governemanta.
Martín Pallares avy amin'ny Desde la Tranquera [es] , dia manontany hoe:
Tena nisy marina tokoa ve ny fanongànam-panjakana teto Ekoatora? Heveriko fa raha te-hiresaka fanongànam-panjakana dia tsy maintsy misy aloha, farafaharatsiny, fikasàna mazava hanaisotra ny Filoha eo amin'ny toerany ka hanolo azy amin'olon-kafa. Ary raha ny zava-nitranga tamin'ny androany dia tena nampalahelo sy fihetsika tsy azo namarinina mihitsy momba ny tsy fetezana hanaraka baiko nataon'ireo manamboninahitra polisy izay nahatsapa, mety ho marina na diso, fa noverezin-jo.
Ny media [es]  Ekoatoriana dia nanamafy ny toerana misy ny hery politika manohitra an'i Correa sy ny fanambaràna avy amin'ny Filoha ekoatoriana teo aloha Lucio Gutiérrez  mikasika ny hetsiky ny tafika sy ny polisy, na dia tatitra sy fomba fijery [es]  hafa mihitsy manameloka aza no avy amin'ireo vaovao farany  avy amin'ny governemanta. Tany ampiandohana, notaterina fa:
@teleSUR_tv : Nangataka ny filoha ekoatoriana teo aloha Lucio Gutiérrez, mba horavàna ny Antenimieran-doholona sady miantso fifidianana filoham-pirenena #PoliciaEc 
Etsy ankilany, Live Media Ecuador [es]  nampahafantatra teo aloha kely teo fa:
Ho an'ny filoha ekoatoriana teo aloha Lucio Gutiérrez, ny zavatra nitranga omaly dia i Correa no nikononkonona azy, mba “hanakonana ny kolikoly” misy ao amin'ny governemantany
Video avy amin'olon-tsotra mikasika ny fitokonan'ny polisy
Narahan'ireo mpampiasa twitter marobe avy eo an-toerana sy manerantany toa an'i Hernán Ramos (@b10_ecuador ), minitra isa-minitra, ny asa fanavotana ny Filoha Correa, :
FANONGANAM-PANJAKANA TAO #ECUADOR  #RafaelCorrea  teo ambany fiahian'ny tafika. VOAMARINA
Misy tatitra milaza fa henjana ny fifampitifirana manodidina ny hopitaly , http://bit.ly/cbhorU,  #Ecuador  #CoberturaTwit 
Na ilay asa fanavotana aza dia naraha-maso akaiky tokoa, tao anatin'ilay fifampitifirana henjana sy ireo olona an-jatony nantsoina hiaro ny filoha tao amin'ilay toerana nihazonana azy. Ireo sary nandritra ny fanavotana, izay azo jerena anatin’ ity video ity , dia hitan'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny aterineto.
Fotoanan'ny tombana: Sivana, fanonganam-panjakana, fihokoana, tabataba an-tserasera [es]
Taorian'ny asa fanavotana dia niteny avy tao amin'ny lapam-panjakan'i Carondelet ny filoha Correa, ary dia nivalona tsikelikely teo ilay resaka andrana fanongànam-panjakana na fihokoan'ny polisy. Na izany aza, izao vao tena manomboka ny fotoanan'ny tombana.
Avy tao amin'ny Facebook FUNDAMEDIOS  [es] no nanakiana ny fandrakofam-baovao atao an-terisetra  ao Ekoatora:
Sivana sy herisetra nahazo ny gazety eto amin'ny firenena sy ny iraisam-pirenena nandritry ny fihokoana nataon'ny polisy manohitra an'i Rafael Correa
Daniel Ochoa [es]  tao anatin'ny bilaoginy dia nanome tombana azo saintsainina tsara tanatin'ny lahatsoratra “30s [30 Septambra] andro iray teto Ekoatora izay antenaina fa azontsika nandraisana lesona betsaka!”
Hanombohana azy, raha ny hevitro dia tsy nisy izany fikasàna hanongam-panjakana izany, fa fotsiny vondrona polisy iray nitroatra (tsikaritra fa tsy izy rehetra no teo), izay tsy nahàraka tsara ny fandehany, ka mahatonga hieritreritra fa misy olona ao ambadik'ireny rehetra ireny (manetsiketsika ny daholobe). Tsy nisy fikasana hanongam-panjakana izany, satria ny mpitarika ny tafika tamina fotoana ofisialy roa dia nilaza fa manohana feno ny governemanta ry zareo.
Ireo olom-panjakana avy amin'ny sehatry ny governemanta [es]  dia nanameloka ilay fikasàna hanongam-panjakana  izay namafisin-dry zareo fa misy idiran'ny Etazonia . Pablo Arciniegas tao amin'ny bilaoginyVoces del Sur  dia nanakiana hoe,
Tsy misy afa-tsy ny hery sy ny atidoha avy amin'ny faran'ny havanana no afaka hanomana hetsika mahamenatra toy ireny sady manohintohina ny demokrasia mbola marefo eto amin'ny firenentsika, amin'ny alalan'ny fitsofohana any anatin'ny laharan'ny polisy, ary ny filalaovana ny fitakian'io sehatra io.
Luis Alberto Mendieta ao amin'ny Política y Sociedad [es]  dia miteny:
Farany, ny zavatra tsy mitsahatra mampivanaka ahy dia ny fandrindràna mampitogaigy ilaina eo amin'ny SEHATRY NY FIRENENA MANONTOLO, aleo dia izay no ilazantsika azy, amin'izay hoe hetsiky ny polisy ho fanongànana ny governemanta, miaraka amina tandindona imperialisma izay tsinjo mazava; betsaka no mitohy mankamina fitoviana hafahafa maro eo amin'izay nitranga tany Honduras sy ity niseho teto Ekoatora ity…
Ireo izay manohitra ny governemanta ankehitriny dia miampanga azy ho mampiasa ny resaka fihokoana ho amin'ny tombontsoa ara-politika [es] . Mandeha lavidavitra kokoa ny filazan'i B10 [es]  manao hoe misy mpisehatra politika hafa vao misondrotra eto amin'ny firenena, ny polisy:
Lasa vaovao manerana izao tontolo izao ny momba ny polisy Ekoatoriana noho ilay fihokoana narindran'ny tarika-notohanan'ny manampahefana- manohitra ny governemanta. Ny Filoha Correa, izay tsy dia ao tsara ny fitantànany an'ity olana ity ka nahatonga azy hovoatohintohina, dia novingavingaina sy nosamborin'ireo polisy tsy voafehy intsony. Avy eo dia nisy ny asa fanavotana mahery vaika nataon'ny tafika. Ny zavatra banga tamintsika: ny polisy izay voalohany mba nirotsaka ho ‘mpisehatra ara-politika’…
Ireo vinavina rehetra ireo dia samy voaresaka ao amin'ny Twitter sy ny tambajotra sosialy daholo, na dia eo ihany aza ireo feo hafa toy ny an'i Jorge Tapia (@jorge052 )‎:
Izao no tadiavintsika, hanaovana trending topic iray [lohahevitra ombam-pironana], #PazParaMiPais [PeaceForMyCountry]  #Ecuador 
Pitonizza ao anatin'ny bilaoginy [es]  dia misaintsaina ny lafiny iray amin'izay ho fiantraikan'ny zava-niseho omaly:
Olon-tsotra ihany aho , izay zatra nino an-jambany ny fiovana entin'ny revolisiona. Tsy nahazo an-tsaina velively mihitsy aho, na dia tany anatin'ny nofy ratsiko aza, fa hoe ny revolisiona dia mety hivadika ho firohotana henjana /mamoa-doza. Toa lasa zava-dehibe ny fanehoana hoe iza no matanjaka kokoa, noho ny hoe ‘hanolo-tena’ hiaro ny filaminana ankapobeny ary ambonin'izany rehetra izany aina sy fianakaviana maro no potika tamin'iny omaly iny. Olon-tsotra nanaraka ireny zava-doza ireny avy aty an-trano aho, naheno ny angidimby nisidina ambany, nahita ireo sary toy ny hoe nalaina avy any anaty sarimihetsika Amerikana amin'irony andiany antsoina hoe ‘action’ irony, nanidy varavarana sy varavarankely noho ny tahotra mafy nahazo ahy.
Amin'izao fotoana dia sady tsy an'ny atsy aho no tsy an'ny aroa. Tsy momba na iza na iza. Mila fandriampahalemana eo amin'ny samy Ekoatoriana fotsiny aho, mba hitohy ny maha mpandàla fitoniana antsika izay efa nataontsika rahateo hatrizay. Mba ho afaka handova tany mendrika honenana ny zanako vavy. Mba tsy ho voatery hitsoaka any an-kafa isika. Ary mba haniry ny hody an-tanindrazana amin'izay ireo any ivelany any.
Ity dia lahatsoratra navoakako tamin'ny anaran'ny tenako manokana, miaraka amin'izay rehetra mety haterany toy ny fahaverezan'ny fitokisan'ireo izay nihevitra fa tsy azo hozongozonina amin'ny hevitro aho. Toetra maha-olombelona ny fanaovana hadisoana, Ary mbola mety ho diso indray aza aho. Tsy misy atahorako hotsaraina intsony, satria ny toetra mivantambantana ananako dia tsy afaka miaraka amin'ny fiforetana anaty fahanginana, matimaty na vasobasoka manoloana ny fotoan-tsarotra toy izao iainantsika amin'ny maha-Ekoatoriana izao.
Ny sary haingo dia avy amin'ny Gabo Diaz, mpampiasa Flickr , nampiasàna ny Attribution-NonCommercial 2.0 Generic Crative Commons license
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/05/9576/
 fihokoa-dry zareo polisy niteraka fikatsoan'ny firenena: https://globalvoicesonline.org/2010/09/30/ecuador-police-strike-denounced-as-attempt-to-destabilize-country/
 Manao adisanina i [es]: http://twitter.com/rtunoticias/status/26100905492
 fomba fijery [es]: http://www.elimpulso.com/pages/vernoticia.aspx?id=109293
 vaovao farany: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jKctbMk78vLE0q6KDZ3lYyL63y2wD9IJ5ND80?docId=D9IJ5ND80
 ity video ity: http://www.youtube.com/watch?v=3-2aCs-1_qw&feature=related
 fandrakofam-baovao atao an-terisetra: http://en.rsf.org/ecuador-police-uprising-against-president-01-10-2010,38482.html
 Ireo olom-panjakana avy amin'ny sehatry ny governemanta [es]: http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=17190:canciller-patino-analiza-la-situacion-del-ecuador-tras-el-intento-sedicioso&catid=2:politica&Itemid=43
 misy idiran'ny Etazonia: http://www.chavezcode.com/2010/10/behind-coup-in-ecuador-rightwing-attack.html
 mampiasa ny resaka fihokoana ho amin'ny tombontsoa ara-politika [es]: http://www.ecuadorenvivo.com/2010100159029/politica/_esto_no_es_un_golpe_de_estado_dice_sonnenholzner.html
 Pitonizza ao anatin'ny bilaoginy [es]: http://www.pitonizza.com/30s-el-dia-mas-oscuro/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PitonizzaPuntoCom+%28Pitonizza+punto+com%29
 Ny sary haingo dia avy amin'ny Gabo Diaz, mpampiasa Flickr: http://www.flickr.com/photos/gabodiaz/4382368426/